SOMALIA IYO WACYIGA HOGAANKEEDA LIITA: WQ Dr. Sadaq Eenow | Sahal News
You are here : Sahal News » Opinion » SOMALIA IYO WACYIGA HOGAANKEEDA LIITA: WQ Dr. Sadaq Eenow
Posted by shl17 on November 5th, 2016 06:59 AM | Opinion, Wararka
GAROWE,(SAHALNEWS)-Ooraah ayaa waxay ahayd, labada go’a ku dagaalamaya, hooyadood waa ay qaawan tahay. Dagaalka Gaalkacayo ka socda maahan mid xal loo-la’yahay, bal sida ay dad badan ka dhawaajiyeen waa dagaal ay siyaasad ka danbayso. Fiisk-yahankii Mareekanka ahaa Albert Einstein ayaa waxaa la weydiiyay, hadii aadamiga uu ku guuleystey in uu sameeyo bambada curiyaha (Atomic Bomb), suuragal ma tahay in dunida laga baabi’yo bambadaas. Wuxuu yiri, maya.
Sababtana waa uu sheegey oo wuxuu yiri: samaynteeda waxaa loo maray waddo aqooneed, laakiin bur-burinteeda waxaa loo marayaa waddo siyaasadeed. Xeerarka siyaasadduna waa ay ka qallafsan yihiin xeerarka aqoonta. Waa arin la yaab leh dad ehel iyo qaraabo ah, dad maatadii iyo maxastii ay meel u wada joogto, dad diin iyo dhaqan wadaaga, dad ay maslaxad aduun iyo aakhiro ka dhaxayso, dad doon qura saaran oo bad-wayn kula luntay, misana xabad isla-dhacaya.
Waxaa halkaas ka muuqda, dhallinyarada dagaalamaya, barnaamijka colaaddoodu in uusan ahayn mid ay iyagu doorteen, laakiin uu yahay mid loo dooray. Waxaa ka yaab-badan, masuuliintii xilka u hayay oo kitaabka ugu dhaartay in ay dayuurad raacaan oo ay ku sheekeeyaan, Abu Dubai ayaanu ku soo heshiinaynaan.
Iyada oo diryanka rasaastu ay ka dul yeereyso dad-waynihii dan-yarta ahaa ee noloshooda la tacaalayay iyo caruurtoodii. In Gaas iyo Guuleed looga yeero waddan shisheeye oo loo yeeriyo in ay nabadda oggolaadaan, sababta keliya oo lagu fasiri karo waxay tahay, in ay yihiin rag aanan qaadi karin masuuliyadda ay ku dhaarteen. Waxaa hubaal ah, haddii caruur ay dhaleen ay ahaan lahaayeen kuwa ay xabaddu ku socoto, kama ayan sugeen diblomaasiyiin shisheeye ah musaalaxad iyo wada-hadalsiin.
Waanu u jeednaa oo khilaafkii siyaasadeed ee Soomaalida wuxuu marayaa in odey-dhaqameedyadii ay isku tooreeyaan xulidda xubnihii dooran lahaa xildhibaanada. In bulshadeenii ay sawirkaas yeelato waxaa u sabab ah nimanka masuuliyadda sare haya. Gaar ahaan kuwa isku bahaystay Madasha Qaran, kuwaas oo shacabka ay matalayaan u been-sheegey, iyagana isu been-sheegaya.
Haddaba aniga oo xushmaynaya masuuliintayada sharafta leh, waxaan jeclaan lahaa hal su’aal in la ii waydiiyo, taas oo ah: Maxay dowladnimo tahay ?.
Waxay noqonaysaa laba midkood. In ay garan-waayaan oo ay noqdaan jaahiliin aanan aqoon u lahayn wixii ay ku dhaarteen. Ama in ay gartaan oo ay noqdaan munaafiqiin aanan ku dhaqmin wixii ay ku dhaarteen.
WQ: DR SAADAQ ENOW, Wasiirkii hore ee caafimaadka Puntland
« DHAGAYSO: Maxaabiis ku xiran Gal-Mudug oo loo wareejinayo Muqdisho
DHAGEYSO:Barnaamijka Ciyaaraha Sahal News »